कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: जेल डायरिको छैठौं अंशको बाकि— सातौं भाग— त्यसपछिका ५ दिन हनुमान ढोका प्रहरी खोरमा
जेल डायरिको छैठौं अंशको बाकि— सातौं भाग— त्यसपछिका ५ दिन हनुमान ढोका प्रहरी खोरमा
जेल डायरिको छैठौं अंशको बाकि— सातौं भाग—
त्यसपछिका ५ दिन हनुमान ढोका प्रहरी खोरमा
छोराले दिन का दिन मलाई विहान बेलुका खाना पु¥याइरहेको छ । मेरा साथीहरू, आफन्तहरू बिहान बेलुका मलाई भेट्न आइरहेका छन् । हातमा हतकडी लगाएर बाहिर जान मलाई मनै पर्दैन । तर के गर्ने ? यो मेरो बसको कुरा होइन । सबैजनाले अदालतमा पेशी भयो भने म छुट्छु होला भनेर ढाडस दिएर जान्छन् । हनुमान ढोका खोरमा बस्दाबस्दै मैले थाहा पाएँ कि सार्वजनिक मुद्दामा २४ दिन, जिउ मास्ने बेच्ने र जवरजस्ती करणीमा ४० दिन र लागू औषध र बन मुद्दामा ९० दिन खोरमा राख्नसक्छ । म यहाँ आएको भर्खर ६ दिन भयो । मेरो दसैं खोरमै बित्ने भयो ।
माथि पुगेपछि एउटा कोठामा जान भन्यो । कोठाभित्र गएको त डी.एस.पी.कुर्सिमा बसिरहेको थियो । उसको सामुन्ने सोफामा सानुराजा शाक्य र राजेन्द्र श्रेष्ठ बसिरहेका थिए । दुबैजनासँग हात मिलाएँ । म पनि उहाँहरूसँगै बसें । कुराकानी भयो ।
“ल हुन्छ, म केटाहरूलाई भनिदिन्छु । डायबिटिजको रोगीलाई बलात्कारको आरोप ? हा..हा..हा कुनै संस्था लागेको होला ।” डीएसपीले हाँस्दै भन्यो ।
“हो, भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन भन्ने संस्था लागेको छ ।” मैले भनें ।
डि.एस.पि.को कोठामा निकैबेर कुराकानी भयो । के मात्र कुरा गर्ने ? सानुराजा र राजेन्द्र जान उठ्नुभयो । म तल आएँ । त्यस दिनदेखि मलाई त्यहाँ बरण्डाभित्र घुम्न दियो । प्रहरीहरूले पनि सम्मान दिन थाले । अबदेखि मैले रोलकल हुँदा तल चोकमा उभिन जानु परेन ।
पेशीको लागि अदालत या सीडीओ अफिस लगेका ५÷६ जना हरेक दिन छुट्ने या जेल चलान हुन्थ्यो । फेरि ८/१० जना थप्थे । दुई सय पचास जनाभन्दा कम कहिल्यै भएन । जानेभन्दा आउनेको संख्या बढ्न थाले । केटाहरू मात्र होइन, केटीहरू आउनेक्रम पनि बढ्न थालेको छ । केटीहरू पनि कोही मसाज सेन्टरबाट, कोही डान्सबारबाट समातेर ल्याएको भन्थ्यो । ३५/४० वर्ष उमेरका महिलाहरूलाई पनि ल्याएको छ । कोही लागूऔषध प्रयोग गरेका, कोही क्यासिनोबाट, कोही जिउ मास्ने बेच्ने अभियोगमा पक्राउ गरेर ल्याउँथ्यो । ती केटीहरूलाई फकाउन त्यहाँ भित्रका दादा टाइपका केटाहरू कुरा गर्न जान्छन । उनीहरूलाई चिया खुवाउँछन् । बाहिरबाट मगाएर खाना खुवाउँछन । उनीहरू दिनभरि कोठामा हुँदैनन् । कहाँ जान्छन् कहाँ जान्छन् । चेकिंग आउने बेलामा भने आइपुग्छन ।
“बा, म पोखरा–काठमाडौं चल्ने बसको खलासी थिएँ । एकचोटी बसमा ठूलै मान्छेको पाकेट मारेछ । थानकोट पुगेपछि पाकेट मारेको उसले थाहा पाएछ । सबैको पाकेट हे¥यो । झोला चेक ग¥यो । उसको पैसा भेटाएन । अनि मैले नै पाकेट मारेर पैसा गायब गरेको भन्ने आरोप लगाएर मलाई प्रहरीमा बुझाई दियो । आज एक्काईस दिन भयो । अब चौबीस दिनको दिन सी.डी.ओ अफिस लान्छ । धरौटी खुल्छ होला । तर के गर्ने धरौटी तिर्न सक्दिन । म जेल जानुपर्छ । तपाई छुट्नुस है बा ।”